Sergio Busquets oo ku maadeestay madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu – Gool FM
Kaddib barbarihii Chelsea, muxuu macallinka Kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ka yiri rajadooda afarta sare ee horyaalka?
Muxuu ka yiri Jorginho bar-bardhicii ay xalay la galeen Arsenal kulankii adkaa ee London derby?
Waa sidee xaaladda Luis Suárez kaddib qalliinkii Jilibka looga sameeyey?
Man United oo rag u soo indha indheeya u dirsatay labo ciyaaryahan muhiim ah
Sergio Busquets oo ku maadeestay madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu
Dajiye June 12, 2018
(Barcelona) 12 Juunyo 2018. Khadla dhexe kooxda kooxda Barcelona Sergio Busquets ayaa wuxuu dhaleeceen u diray madaxweynaha kooxda Josep Maria Bartomeu, kadib markii uu sheegay in koobka aduunka uu taageeri doono xulka qaranka Argantina uu hogaaminayo Lionel Messi.
Sergio Busquets ayaa wareysi uu siiyay shabakada “Mundo Deportivo” ee gobolka Catalonia wuxuu kaga hadlay hadalka naxdinta leh ee kasoo yeeray madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu.
“Tani waa wax cajiib ah, sababtoo ah Josep Maria Bartomeu wuxuu yestaa ciyaaryahano dhowr ah, hadaladiisa ayaa noqon kara qaab diblomaasi ah markii la weydiiyay Lionel”.
“Laakiin hadii la su’aalay waa inaan weydiino sababta” Sergio Busquets ayaa si jees jees ah hadalkiisa u sii raaciyay “Laga yaabee inuu leeyahay qoys reer Argentina ah”.
“Waan ka carooday hadalkiisa, laakiin qof walba waxa uu leeyahay fikrad, waxaana laga yaabaa inuu jecel yahay xidigaha Lionel Messi iyo Mascherano oo kooxda nagula sugnaa”.
Jordi Alba ayaa sidoo kale dhaleeceeyay hadaladii Josep Maria Bartomeu ee ku saabsan in koobka aduunka uu taageeri doono xulka qaranka Argantina sababa la xiriira Lionel Messi. wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu doonayo in xulkiisa Spain uu ku guuleysan doono Koobka Aduunka.
Waa sidee ra’ayiga Julen Lopetegui macalinka cusub ee kooxda Real Madrid kaga aadan Cristiano Ronaldo?
Jose Mourinho oo saadaaliyay afarta xul qaran ee gaari karta wareega semi-finalka Koobka Aduunka 2018